Lela tokana, teny roa, dika telo
Accueil » Chronique » Lela tokana, teny roa, dika telo
Roa loha moa ny zavatra noresahina omaly, ka ilay fikasana hanaotao foana tao anaty hadivorin’ny vohitr’Andriananahary, izay nanafintohina ny maro, no hany toa nironan’ny saina. Ity anefa Tantara sahady ihany koa. Ka aleo averiko eto manokana.
Rafohy, hono, ka vadin-dRapeto (jereo Philippe Beaujard, «Madagascar et les réseaux d’échanges de l’Océan Indien (avant le XVIe siècle)», in Sylvain Urfer (coord.), Histoire de Madagascar. La construction d’une nation, Antananarivo, Foi et Justice, 2020, tak.34). Tsy raisina ara-bakiteny izany fa misy hevi-dalina : olona tononina ho kely, manambady olona malaza ho goavambe, indrindra raha «Lanitra» ny zanany. Lanitra, amin’ny teny indoneziana, «Langit», ka sao dia Langita tokoa fa tsy Rangita. Raha anaran-danitra mantsy dia mifandraika indrindra amin’ny anaran’ireo razambeny vazimba (Andriandravindravina, Andrianerinerina, Andrianoranorana, Andriamanjavona, Andriandranolava).
Telo mianadahy no zanak’i «Lanitra/Langit» : Andriamanelo, Rafotsy- indrindra-manjaka, Andriamananitany. Andriamanelo niteraka an-dRa-lambo (omby no lambo amin’ny teny indoneziana). Andriamananitany, niteraka an’Andrianamboninolona. Andrianamboninolona nampanambadiana ny anabavin-drainy Rafotsy-indrindra (izany hoe tsy voapetina, sa ilay tokony tsy nokasihina ho vadian’ny zanak’anadahy). Ny zanak’izy mianaka, Ratsitohina, nampanambadiana indray an-dRalambo ary niteraka an’Andrianjaka, zanaky ny lova-tsymifindra telo sosona. Andrianjaka, razan’Andriamasinavalona. Ny « Terak’Ifohiloha», manana Tranomanara, izany dia taranak’ Andriamananitany ihany koa.
Paul Ottino (1929-2001), nanadihady imbetsaka ary lalina ny tetezamita Vazimba-Andriana avy amin’ny Angano/Arira, no isan’ny nitiavako ny Tantara. Nitambelona lavitra amin’ny Tetiaran-Tantara Gasy izy. Niverina an-doharano tokoa ka tody hatrany Indonezia (anarana vao noforonina tamin’ny taonjato faha20 io) : nolovaintsika avy any avokoa hono ry Andriambahoaka-fovonitany, Ibonia, Imaitsoanala…
Ampio aho handika amin’ny teny gasy ny hoe « Ambiguïté et plurisignification». Anefa isika mihitsy izany. Lela tokana, teny roa, dika telo.
Cas suspects covid-19 – Vingt-trois cas reçus par jour au niveau des CSB 2
Atsimo Andrefana – Le reboisement de proximité lancé